February 9, 2020 - Myitter
တောင်ငူ – ရန်ကုန် ရွှေမန်းသူ Express ယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည်ကိုယ်ဝန် (၇)လဖြင့် ခလေးမွေး ….
တောင်ငူ-ရန်ကုန်ရွှေမန်းသူ Express ယာဉ်ပေါ်ပါခရီးသည်ကိုယ်ဝန် (၇)လဖြင့် ခလေးမွေးဖွားမှု ယနေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်။ ယနေ့ည (၀၈၄၅) နာရီအချိန် မိုင်တိုင် (၅/၀) အနီးတွင် တောင်ငူ-ရန်ကုန်ပြေးဆွဲသည့်၊ ရွှေမန်းသူ Express ယာဉ်အမှတ် 2D/—ခုံနံပါတ်(၁၁)တွင် လိုက်ပါလာသည့် မနွေးနွေးဇင်၊၂၃နှစ်၊ မြို့ဦးရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နေသူသည် (၇)လအရွယ်ကိုယ်ဝန် မွေးဖွားရန် ဗိုက်နာလာသဖြင့် […]
လေဖြတ်နေတဲ့ သမီးကို တံမြက်စည်းရောင်းပြီး ရှာကျွေးနေရှာတဲ့ ၈၆ နှစ်အမေကြီးကို ကူညီပေးကြပါ ….
ZawGyi လောကမှာ ငွေကအဓိကတဲ့…အလုံးစုံမမှန်ပေမဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့ ငွေက အလွန်အရေးကြီးတာပါ… ဒါကြောင့်လည်း မိမိအရွယ်ကိုမမှုဘဲ ဇရာကိုအံတုလို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ၈၆ နှစ်အရွယ် အဘွားတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ပရိသတ်ကြီးတို့ သိရှိကူညီနိုင်အောင် အောက်မှာ မျှဝေလိုက်ရပါတယ်… “အပြင်မှာ တံမျက်စည်းလည်ရောင်းနေတဲ့ အသံကြားလို့ ဝယ်မလို့ လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ချိနဲ့နဲ့အားအင်နဲ့ […]
မန်တလေး ကြှဲဆညျကနျ ကားဝငျးအနီး တှငျ မီးလောငျကြှမျးနသေဖွငျ့ Level3အဆငျ့ ဖွငျ့ ငွှိမျးသတျနရေ (ရုပျသံ)
ယနေ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၉ ရကျ ညပိုငျးတှငျ မန်တလေး ကြှဲဆညျကနျကားကှငျးမွောကျဘကျ လမျးသှယျ(၂) မီးလောငျနကွေောငျးသိရှိရ Lavel3အဆငျ့သတျမှတျ မီးသတျအဖှဲ့မြား အပွငျးအထနျ မီးငွိမျးသတျနရေကွောငျး သိရသညျ။ မန်းလေး မီးက နေ့စဉ်လို ဖြစ်နေပြီး သတိထားကြပါ ၉.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၂၀ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ […]
❝ စိတ်ကို ကျွဲထိန်းသလို ထိန်းပါ ❞(တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေး) တစ်ခါတော့ ..မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ တစ်ခုသို့ ဆရာတော် တရားဟောကြွလေ၏။ ထိုဒေသတွင် မိုးများသည့် အတွက် တောင်ယာသမား အများစုသည် နွားအစား ကျွဲများဖြင့်သာ ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးကြရလေ၏။ ကျွဲများသည် သန်မာထွားကျိုင်းပြီး ချိုကြီးများ ကားနေ၏။ ဆရာတော်သည် […]
ဘန်ကောက်က ဘုရင့်သမီးတော် အငယ်ဆုံးလေး ဖွင့်ထားပေးတဲ့ အစိုးရဆေးရုံတဲ့….
ဘန်ကောက်က ဘုရင့်သမီးတော်အငယ်ဆုံးလေး ဖွင့်ထားပေးတဲ့ အစိုးရဆေးရုံတဲ့ ဘန်ကောက်က အစိုးရဆေးရုံတဲ့ ကိုယ်တွေဆီက အထူးကုဆေးရုံတွေထက်ကောင်းနေသလို 😁😁 ဘုရင့်သမီးတော် အငယ်ဆုံးလေးဖွင့်ထားပေးတာတဲ့ ဈေးကတော့ ဘန်ကောက်က ပုပ္ပလိက ဆေးရုံတွေနဲ့ (၁၀)ပုံ (၁)ပုံပဲ ကျတယ်။ (ကိုယ်တွေ့) တစ်ယောက် သီးသန့်ခန်း အမေဆို ဆေးရုံမှာ (၂)ညအိပ်၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းမှ […]
မိန်းမတွေဆိုတာ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ▪
မိန်းမတွေဆိုတာ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ▪ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ် အသင့် အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေး တစ်ချို့ ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော် […]
မီးရှို့ခံရတဲ့ ညီမလေးလွင်မာဦး ဒီနေ့မနက် ၆:၀၀ မထိုးခင်က ဆုံးသွားပါပြီ …
မီးရှို့ခံရတဲ့ ညီမလေးလွင်မာဦး ဒီနေ့မနက် ၆:၀၀ မထိုးခင်က ဆုံးသွားပါပြီ… သူ့အမေကိုယ်တိုင် အကြောင်းကြားတာပါ… မီးရှို့ခံရပြီး ဆုံးသွားရှာသူလေးမို့…မိသားစုက မီးမသင်္ဂြိုလ်ဘဲ…သန်ဘက်ခါရေဝေးမှာ ဂူသွင်းဖို့ စီစဉ်နေပါပြီတဲ့… ဖြစ်လေရာ ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ ဝေးပါစေ ညီမလေးရယ်… သူတော်ကောင်းများနဲ့သာ တွေ့ဆုံပါစေ … ဝဋ်ကြွေးရှိရင်လည်း ဒီဘဝ ဒီမျှနဲ့ ကြေပါစေ […]
အသကျကယျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးနားက တဈဖဝါးမှ မခှာတော့တဲ့ ဆငျပေါကျလေး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကမ်ဘာကွီးမှာ အကွငျတရား၊ ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ ရိုသလေေးစားမှုတှေ ပါးလလြာနတောက ကမ်ဘာကွီးအတှကျ အရုပျဆိုး အကညျြးတနျမှုကို ပုံသှနျးလောငျးနပေါတော့တယျ။ လထေုညဈညမျးခွငျး၊ တရားမဝငျ အမဲလိုကျခွငျး၊ အမဲဖွတျခွငျးမြားနှငျ့ တိရစ်ဆာနျတှနေဲ့ ကြေးငှကျသာရကတှကေို ဖမျးဆီးခွငျးတှကွေောငျ့ လူတှဟော တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျတှအေတှကျ ခွိမျးခွောကျမှု […]
အိမ်မှာ နှင်းဆီပင်စိုက်ချင်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ချက်များ အပင်စိုက်ရတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူတွေက အိမ်မှာ ရသလိုလေး အပင်စိုက်ကျပါတယ်။ နှင်းဆီပင်စိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး သိထားသင့်တဲ့ါ အချက်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်. ၁။ နှင်းဆီပင်လေးတွေက နေရောင်ကြိုက်ပါတယ်။ အရိပ်ထဲမှာ မစိုက်ပါနဲ့။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး (၆) နာရီလောက် နေရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ စိုက်ပါ။ […]